Bitcoin: မာတင် Vrijland
2018 crypto ငွေကြေးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကမ္ဘာတွင်ငွေကြေး SDR ၏နိဒါန်းရာနှစ်ဖြစ်?
အတွက် Filed Bitcoin, NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	ဒီဇင်ဘာလ 12 2017 အပေါ်	• 11 မှတ်ချက်
အစောပိုင်းကယခုသီတင်းပတ်ငါ Facebook ပေါ်မှာ 1988 ထံမှ The Economist မဂ္ဂဇင်း၏ရှေ့စာမျက်နှာတင်ခဲ့သည်။ ဤစာတမ်းသည်ပိုက်ဆံလည်းမီးလောင်ပေါ်တက်သတ်မှတ်သည့် phoenix ပုံဖော်နေပါတယ်။ အဆိုပါ phoenix ၏လည်ပင်း၌သိသိသာသာအလွန်ဆင်တူသည့် crypto ငွေကြေး Bitcoin ၏လုပ်နေတာရွှေဒင်္ဂါးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြွေစေ့တွင်ကျွန်တော် [ ... ] တွေ့မြင်
ဘယ်လို IMF ကအထူး Drawing ငြ့်အရေးဆိုင်ရာ (SDR) မှ Bitcoin နှင့်အခြားသူများ ACChain ကနေတဆင့်ဆက်နွယ်နေပါလိမ့်မည်
အတွက် Filed Bitcoin, NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	ဒီဇင်ဘာလ92017 အပေါ်	• 16 မှတ်ချက်
လူတိုင်းအတွက်ယခု crypto ငွေကြေးမှတဆင့်အမြန်ငွေရှာဖို့ Bitcoin အပေါ်အာရုံစူးစိုက်တာဖြစ်ပါတယ်စဉ်အခါ, crypto-ဖောင်းပွအမှန်တကယ်အဓိကအားမကြီးတွေဘဏ်များများ၏ချုပ်ကိုင်ထားနှင့် IMF ကအောကျစှဲကြောင်း crypto ငွေကြေးအောငွေကြေးစနစ်ကအားနည်းစေခံရဖို့ပုံရသည် ။ ဒါဟာအမည်မသိတစ်ဦးငွေကြေးကိုပါလိမ့်မယ် [ ... ]
အဘယ်ကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာအဘယ်သူမျှမတိုင်းပြည် Bitcoin ၏ကြီးမားပါဝါအကြောင်းကိုတိုင်ကြား
အတွက် Filed Bitcoin, NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	နိုဝင်ဘာလ 30 2017 အပေါ်	• 17 မှတ်ချက်
crypto ငွေကြေးအဖြစ် (အထူးသဖြင့်) အကြီးစားအများကြီးလျှပ်စစ်မီး Bitcoin ကိုသုံးပါ! ဒါကြောင့်တစ်ခုလုံးကိုနိုင်ငံများတွင်များ၏စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုထက်ကျော်လွန်နိုင်အောင်အများကြီးဖြစ်ပါတယ်။ Bitcoin သတ္တုတူးဖော်ရေးထိုကဲ့သို့သောအိုင်ယာလန်နဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားအဖြစ်နိုင်ငံအများထက်ပိုပြီးပါဝါစားသုံးမှု။ နိုဝင်ဘာလ 28 Naturalnews.com က်ဘ်ဆိုက်တွင် (ကဒီမှာကြည့်ပါ) ကမ္ဘာပေါ်မှာနိုင်ငံအားလုံးမှ Bitcoin များ၏စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှင့်အတူတက် လာ. ။ [ ... ] သာ
AI အနှင့်အတူ 'ဆိုတဲ့အနည်းကိန်း' နှင့်စုစည်းလုပ်ဖို့ Bitcoin ကဘာလဲ?
အတွက် Filed Bitcoin, NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	နိုဝင်ဘာလ 28 2017 အပေါ်	• 15 မှတ်ချက်
သင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အ Bitcoin ၏ဖြစ်ရပ်ဆန်းပိုမိုနက်ရှိုင်းသွားလျှင်, "သင်ငါသည်ဤဆောင်းပါး၌ပေးသောရိုးရှင်းတဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထံသို့လာကြ၏။ တစ်ဦးသောအရာကို Bitcoin ၏အခြေခံသဘောအရသို့မဟုတ် crypto ငွေကြေးချီးမွမ်းစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်တကယ်တော့ဒါဟာအဖြစ်မှန်တာများလွန်းရိုးရှင်းသောကိုယ်စားပြုမှုဖြစ်ခဲ့သည်။ crypto ငွေကြေး [ ... ] ပိုပြီးနှင့်အရာအားလုံးဖြစ်ပါသည်
အသီးသီးအဆိုပါ Bitcoin နဲ့ 'Big Data' 'အသစ်ကရွှေကိုသစ်ကိုရေနံ?
အတွက် Filed Bitcoin, NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	နိုဝင်ဘာလ 27 2017 အပေါ်	• 8 မှတ်ချက်
အဆိုပါ Bitcoin အဓိကအားဖြင့်အမည်မသိနဲ့တူနှင့်အိမ်တွင် mail ဖြင့်၎င်းတို့၏မူးယစ်ဆေးပေးချင်ခဲ့သူတွေကိုဖြင့်၎င်း၏အစောပိုင်းနှစ်များတွင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ယူရို bitcoints ရှူဖို့မေ့လျော့7ကြောင့်နှင့် 10 နှစ်ပေါင်းနဲ့စတင်သူများသည်ယခုပထမဦးဆုံး bitcoinmiljonairs ဖြစ်နိုင်သည်။ သင်သာ 2010 10 ယူရိုပါလျှင် [ ... ] မှ